Nin ay isku hayb yihiin ra'isul wasaare Geeddi oo la sheegay in uu ka dambeeyay weerarkii lagu qaadaya madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo dadka degan agagaarka madaxtooyada oo lagu amray in ay ka guuraan guryahooda si loo dejiyo ciidamada Puntland. Ruunkinet 21/01/07
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya in weerarkii lagu qaaday madaxtooyada Villa Soomaaliya habeen hore uu ka dambeeyay nin lagu magacaabo Dhagaxtuur oo ay isku hayb yihiin ra'isul wasaare Geeddi.
Warkan oo aan la xaqiijin ayaa sheegaya in mudane Dhagaxtuur uu ka xumaaday kadib markii laga reebay maamulka gobolka Banaadir ee uu ku jiray.
Ra'isul wasaare Geeddi ayaa horay ugu magacaabay madaxa dekedda magaalada Muqdisho nin ay qaraabo yihiin.
Dhanka kale, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee looga arrimiyo madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa soo saartay amar lagu wargeliyayo dadka ku nool xaafadda u dhow Madaxtooyada in ay kaga guuraan muddo 3 maalmood ah gudahooda.
Warka ayaa intaasi ku daraya in ay aad uga xumaadeen amarkan lagu soo rogay dadka ku nool guryadooda oo ay wararka qaar sheegayaan in la doonayo in la dejiyo ciidama laga keenay Puntland iyo qowysaskooda.
Dowladda federaalka ah ayaa sheegtay in ay arrinta la xiriirto dhinaca ammaanka mas'uuliyiinta ku sugan madaxtooyada Villa Soomaaliya.